जीवनको साथमा अन्जलीको हट अवतार! - Glamorous Icon
१० असार २०७६, मंगलवार १३:००
Home›GIcon News›जीवनको साथमा अन्जलीको हट अवतार!
चर्चित गीत ‘बोलमाया’को भिडियोमा देखिएकि अञ्जली अधिकारीको अभिनय प्रशंसा भइरहेका बेला उनि अर्को गीतको भिडियोमा हट अवतारमा देखा परेकी छिन्। प्रेमीले अक्कल झुक्कल र कल्पनामा मात्रै आउने सुन्दरी प्रेमीकाको कल्पना गरेको दृश्यमा उनी निकै बोल्ड देखिएकी छिन्। सार्वजनिक गीतमा अञ्जलीलाई जीवन भट्राई र रिचा थापाले साथ दिएका छन्।
नवराज सापकोटाको नयाँ गीत ‘म निदाएसी आयौ’ बोल रहेको गितको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो। नरेश गौतमका शब्द शृजनामा एनके ब्रदरर्सको संगीत शृजना रहेको गीतमा पछिल्लो समयकी चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीको अहिलेसम्मकै हट तथा भिन्न अभिनय रहेको दाबी गरिएको छ।